07/16/14 ~ MM Daily Star
တာချီလိတ်၌ မိုးရွာ၍ မြေထိန်းနံရံပြိုကျရာမှ လွတ်မြေ...
ယောင်္ကျားဖြစ်သူ ဖဲရှုံး၍ မိန်းမဖြစ်သူ ငရဲမီးသောက်သေ
နာကျင် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ရဲဆေးစာမလိုဘဲ ဆေးကုသပေးမ...
15:00 သောက်တလွဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် No comments
ကမ္ဘာကျော် အာရပ် အစ္စရေး ခြောက်ရက်ကြာစစ်ပွဲ အကြောင်း သိကြမှာပါ။
၁၉၆၇ ဇွန်လ ၅ ရက်နေ့က စချကြတာ ၁၀ ရက်နေ့မှာ ပြီးဆုံးပါတယ်။
အစ္စရေးက အပြတ်အသတ် နိုင်ခဲ့ပါတယ်။
အစ္စရေးကို အာရပ်အင်အားကြီးနိုင်ငံတွေဖြစ်တဲ့ အီဂျစ် ဆီးရီးယား ဂျော်ဒန် နဲ့ အီရတ် တို့က ဝိုင်းတိုက်ကြတာပါ။အာရပ်တွေဖက်က အယ်လ်ဂျီးရီးယား ကူဝိတ် လစ်ဗျား မော်ရိုကို ပါကစ္စတန် ပါလက်စတိုင်း ဆော်ဒီ ဆူဒန် တူနီးရှားတို့က ငွေကြေး လက်နက် ထောက်ပံ့ပါတယ်။
အစ္စရေးက တစ်ကောင်တည်းပါ။ တစ်ကောင်တည်း ဒါပေမယ့် . . .
အစ္စရေးမှာ အမြဲတမ်းစစ်သည် ၅၀၀၀၀ ပြည်သူ့စစ် ၂၁၄၀၀၀ လေယာဉ် ၃၀၀ တင့်ကား ၈၀၀ အာရပ်တွေဖက်က စစ်သည်၅၄၇၀၀၀ လေယာဉ် ၉၅၇ စီး တင့်ကားပေါင်း ၂၅၀၄ စီးပါ။ အင်အားချင်း ယှဉ်ကြည့်ကြပါ။ အစ္စရေး တစ်နိုင်ငံထဲကို စစ်မျက်နှာ လေးခုဆိုင်ရပါတယ်။ ဆိုင်းနိုင်းကျွန်းဆွယ်နဲ့ ဂါဇာကမ်းမြောင်ဒေသမှာ အီဂျစ်တပ်တွေနဲ့ ဆိုင်ရပါတယ်။ ဂိုလန်ကုန်းမြင့်မှာ ဆီးရီးယားနဲ့ အနောက်ဖက်ကမ်းနဲ့ဂျေရုစလင်အရှေ့ဖက်မှာ ဂျော်ဒန်ဦးဆောင်တဲ့ တပ်တွေနဲ့ပါ။
အဲဒီတုန်းက အီဂျစ် သမ္မတ နက်ဆာက သူ့ရဲ့ အလွန်အင်အားကြီးတဲ့ တင့်ကားတပ်တော်ကြီးအားကိုးနဲ့ ဂျူးတွေကို ၂၄ နာရီအတွင်းမောင်း ထုတ်ပစ်မယ် မြေထဲပင်လယ်ထဲ ကန်ချပစ်မယ်လို့ ကြိမ်းဝါးခဲ့တာ အားလုံး အသိပါ။
အဲဒိမှာအီဂျစ်စစ်သည် တစ်သိန်း နဲ့ တင့်ကား ၁၀၀၀ ရှိနေပါတယ်။
သူ့တင့်ကားတပ်ကြီးဖြန့်လိုက်တာ စစ်မြေပြင်တစ်ခုလုံး ပြည့်သွားတာပါ။
စစ်သတင်းထောက်တစ်ယောက်ရေးခဲ့တာ ကျနော်မှတ်မိသလောက် ပြောရရင်
အစ္စရေးတပ်က ပင်လယ်ကိုကျောပေးပြီး ဖြန့်ထားတာပါ။ ကတုတ်ကျင်းတွေမှာ ကုတ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်။
အီဂျစ်တင့်ကားတပ်ကြီးက မိုးခြိမ်းသလို ချီတက်လာတယ်။
အလွန့်ကို နီးကပ်တဲ့အထိ ဘာမှ မလုပ်ဘဲငြိမ်နေတာ။
သူတို့လိုချင်တဲ့ အကွာဝေးကျမှ ရုတ်တရက် မီးမောင်းကြီးတွေ ထိုးလိုက်တယ်
မြင်ကွင်းက ရှင်းနေတဲ့အခါ ဘယ်လိုနှက်လိုက်တယ်မသိဘူး
တပ်ဦးက တင့်ကားတွေဟာ မိုးပေါ်မြောက်သွားပြီး နောက်ကတပ်ပေါ်ကျတယ်
အဲလိုနဲ့ တစ်စီးပြီးတစ်စီး အစီးပေါင်းမြောက်များစွာဟာ မီးချစ်ဘူးလေးတွေ ကန်လိုက်သလို လေထဲမြောက်သွားပြီး ပြန်ကျလာတယ်လို့ ရေးပါတယ်။
တကယ်တော့ အစ္စရေးတွေလက်ထဲမှာ တင့်ကားဖျက်လက်နက်တွေ တီထွင်ထုတ်လုပ်ထားတာကို အာရပ်တွေ မသိခဲ့ပါဘူး။ တင့်ကားဆိုတာ အဲသည်တုန်းက ဖျက်လို့မှမရတာ။
နောက်ဆုံး အာရပ်တွေ တင့်ကား ရာပေါင်းများစွာ ဖျက်ဆီးခံရတယ်။
လေယာဉ် အနည်းဆုံး ၄၅၀ ပစ်ချခံရတယ်။အစ္စရေး ကျဆုံး အဖမ်းခံ ၁၀၀၀ အာရပ် ၂၅၀၀၀။ စစ်ရှုံးလို့ ဂါဇာ ဆိုင်းနိုင်း ဂျော်ဒန်မြစ်အနောက်ဖက်ကမ်း ဂိုလန်ကုန်းမြင့်တွေ အစ္စရေးကို ပေးလိုက်ရတယ်။ ဒီလောက် လူသူလက်နက် အင်အားကွာခြားလှတဲ့ စစ်ပွဲကို အစ္စရေးတွေ ဘာကြောင့်နိုင်သလဲ။
အစ္စရေးထောက်လှမ်းရေး မော့ဆက် သူလျှိုတွေ ထိုးဖောက်သတင်း ရယူနိုင်စွမ်းနဲ့ အမိမြေ စစ်သတင်းလုံခြုံရေးဟာ အဓိက ပါလို့ သုံးသပ်သူတွေက ကောက်ချက်ချပါတယ်။ နာဇီတွေစစ်သတင်း လုံခြုံရေးပေါက်လို့ ဒုတိယကမ္ဘာစစ်မှာ မဟာမိတ်တွေ ရေကြောင်းချီစစ်ပွဲမှာ အရေးသာခဲ့တဲ့ အကြောင်း ရုပ်ရှင်တောင်ရိုက်ထားတာရှိပါသေးတယ်။
စဉ်းစားတော်မူကြပါ။ ဘယ်လို ဒီမိုကရေစီ နိုင်ငံ ပဲဖြစ်ဖြစ် အဲလို နေရာတွေ ကို ဘယ်လို အကြောင်းနဲ့ မှ လွယ်လွယ်ကူကူ ဝင်ခွင့်ပေးမထားတတ် ကြဘူး ။ ဒီနေရာတွေ ဟာ ကန့်သတ်နယ်မြေ ဆိုတာကိုလည်းကြေငြာထားတတ်ကြတယ် ။ ဥပဒေတွေ နဲ့ ပြဌာန်းထားကြတယ် ။ အဲဒီကြားထဲက ကျူးကျော်ဝင်ရောက်သူ ၊ ဖောက်ဖျက်ကျူးလွန်သူကိုလည်း ခွင့် မလွှတ်တတ်ကြဘူး ။
ယူနတီသတင်းထောက်တွေ ထောင်ဒဏ်၁၀ နှစ်ကျခံ ရတာနဲ့ ပက်သက်လို့ ပြစ်ဒဏ်ပြင်းထန်လွန်းတယ်လို့ ပါစင်နယ်ထင်မြင်မိတာ က တစ်ပိုင်းပါ ။ ဒါပေမဲ့ မီဒီယာတွေ အနေနဲ့ အစိုးရ နဲ့ တပ်မတော်က ပဲ မီဒီယာ ကို နှိပ်ကွပ်နေသယောင် ပုံဖော်နေကြတာ ဟာ လွဲမှားမှု ဖြစ်ပါတယ် ။ စစ်တပ်က မတရားထောင်ချတာ ၊ ပြည်သူတွေရဲ့သိပိုင်ခွင့် ကို ပိတ်ပင်တာ ဆိုတဲ့ စကားတွေဟာ ယုတ္တိ မဲ့ပါတယ် ။ သတင်းရေးလို့ တရားစွဲ ဆိုခံရတာ မဟုတ်ပါ ။ လုံခြုံရေးအရ ကန့်သတ်ထားတဲ့ နယ်မြေအတွင်း ကျူးကျော်ဝင်ရောက်လို့ ၊ သတင်းအချက်လက် ရယူလို့ တရားစွဲဆို အပြစ်ပေးခံရတာဖြစ်ပါတယ် ။
မီဒီယာ လောကသားတွေ လည်း ပဲ နိုင်ငံသားတွေဖြစ်ပါတယ် ။ မည်သူမဆို လိုက်နာရမဲ့ ဥပဒေတွေ ကို ချွင်းချက် ပေးလို့ မရပါဘူး ။ နောက် မီဒီယာရဲ့ မကျေနပ်ချက်တွေကို သတင်းလုပ်ပြီး ရေးသားနေတာ ၊ ရောင်းစားနေတာ တွေ ၊ သတင်းမယူတာကို သတင်းလုပ်မယ်ဆိုတဲ့ အံ့သြဖွယ် ပရော်ဖက်ရှင်နယ်မဆန်တဲ့ ကြွေးကြော်ချက် တွေဟာ ...တနည်းအားဖြင့် အလွဲသုံးစား လုပ်နေတာ ပါ ပဲ ။ ပြည်သူတွေကို သတင်းပေးရ တဲ့ ကိုယ့် လုပ်ပိုင်ခွင့် ကို ကိုယ်ကျိုးစီးပွား အတွက် အသုံးချနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ် ။ အာဏာ ပါဝါ ရှိ မှ အလွဲသုံး စား ၊ အဂတိလိုက် စား လို့ရတ်မထင်ပါနဲ့ ။ အပေါ် မှာ ပြောခဲ့ တဲ့ ကိစ္စတွေသည်လည်းပဲ အလွဲသုံးစားခြင်းတစ်မျိုးပါပဲ ။
နောက် အယ်ဒီတာ မင်းရဲ့ ခုသတင်းကြောင့် တပ်မတော် ဘာထိခိုက်သလဲ ၊ အစိုးရဘာနစ်နာသွားသလဲ ဆိုတဲ့ ဦးနှောက်မဲ့လွန်းတဲ့ မေးခွန်း ကို ကြားရတာ အတော် လေး အံ့အားသင်မိတယ် ။ စစ်ပွဲ တစ်ပွဲ ကို စတင် တိုက်ခိုက် တော့ မယ် ဆိုတာ စစ်ရေး သုံးသပ်ချက် လုပ်ရတာ စစ်တပ်တိုင်းမှာ ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ စစ်ရေးသုံးသပ်ချက်လုပ်တိုင်း အရင်ဆုံး စရတာသည် သတင်းစုဆောင်းမှု ဖြစ်ပါတယ် ။ အဲဒီ စစ်ရေးသတင်း ရရှိနိုင်ဖို့ အတွက် သူလျှိုတွေ လွှတ် ၊ နည်းပညာအင်အားတွေ သုံး ၊ လူအင်အား ၊ ငွေကြေးအင်အားတွေ မြောက်များစွာ သုံးပြီး ရယူကြရတာဖြစ်ပါတယ် ။ အခု သတင်းကြောင့် အနည်းဆုံးတော့ ပေါက်မြို့နယ် တွင်းမှာ မြန်မာ့တပ်မတော်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးလက်နက် စက်ရုံတည်ရှိနေတယ်ဆိုတာ ကမ္ဘာက အတော်များများ သိသွားကြပါပြီ ။ စစ်သုံးမြေပုံတွေ ထုတ် ၊ စစ်သုံးဂြိုလ်တုတွေ ကနေ ကောင်းကင်ဓာတ်ပုံတွေ ထုတ် ခန့် မှန်းနေရာလေးတွေ မှတ်သား ။ မြေပုံညွှန်းတင် ။ ပစ် မှတ် မှတ်ပုံတင်ခြင်းတွေလုပ် ထားရုံလေးပါ ။ မြန်မာနိုင်ငံ နဲ့ စစ်ပွဲ ဖြစ်လာတာနဲ့ သွားတိုက်စရာလည်းမလိုတော့ပါ ၊ လေယာဉ်တွေ လွှတ်ပြီး ပစ်မှတ်ရှာဖို့လည်းမလိုပါ ၊ ကွန်ပြူတာ ကနေ အန်းတားထိုင်ခေါက်ရုံပါပဲ ။ ဘေးပတ်ပတ် လည် က တရုတ် ၊ အိန္ဒိယ ၊ ထိုင်း ၊ ဘင်္ဂလားဒေ့ရှ် နိုင်ငံ အားလုံး မြန်မာ တစ်ပြည်လုံးကိုဖြန့် ကျက် နိုင်တဲ့ ဒုံး စစ်စတမ် တွေ ပိုင်ဆိုင်ထားပြီးဖြစ်ပါတယ် ။ သူတို့ မှာ လိုအပ်နေတာ အရေးကြီးနေရာ ပစ်မှတ်တွေကို မြေပုံညွှန်းပေးနိုင်ဖို့ သာ ဖြစ်ပါတယ် ။ ဒါဟာ တပ်မတော်နစ်နာ တာ မဟုတ်ပါဘူး ၊ အစိုးရကိုထိခိုက်တာ မဟုတ်ပါဘူး ။ မြန်မာတစ်မျိုးသားလုံးနစ်နာတာ ၊ ထိခိုက်တာဖြစ်ပါတယ်
ကျွန်တော်တို့ ဆီ က မီဒီယာတွေ အတော်များများ ဟာ ကိုယ်ကျိုးစီးပွား က လွဲလို့ ဘာမှ မကြည့် ကြဘူး ။ အစိုးရ မကောင်းကြောင်းပြောရပီးရော ။ ကိုယ်ထောက်ခံသော ၊ ကိုယ်ယုံကြည်သော လမ်းကြောင်းတစ်ခု အောင်မြင်စွာ အကောင်ထည် ဖော်နိုင် ဖို့ ဘာကို ပဲ စတေးရ စတေးရ ဆိုတဲ့ လူစားတွေ များတယ် ။
(၁) ယူနတီ သတင်းသမားတွေ နဲ့ ပက်သက်လို့ ဒီသတင်းရေးသင့်သလား မရေးသင့်သလား ။ သတင်း သမား က မစဉ်းစားဘူး ။ သတင်း သမား က လုပ်သက်မရှိလို့ အယ်ဒီတာ က စဉ်းစားသလား ဆိုတော့ မစဉ်းစားဘူး ။
(၂) ဒီဂျာနယ်က သူထင်ရာစိုင်း နေတဲ့ ဂျာနယ်မို့ ...စာပေနဲ့ စာနယ်ဇင်းအဖွဲ့ တွေက ဥပဒေ နဲ့ အရေးယူခြင်း မခံရအောင် အချင်းချင်း ထိန်းသလား ။ မထိန်းဘူး ။ အခြား ဂျာနစ်တွေ ကော အချင်းချင်း သတိပေး သလား ၊ မလုပ်သင့် မလုပ်ထိုက်တဲ့ အကြောင်း ဆောင်းပါးတစ်စောင်ရေးကြ သလား ။ မပေးဘူး ၊ မရေးဘူး ။
(၃) ပြည်ထဲရေး က တရားစွဲ တယ် ။ တရားစီရင်ပြီး ပြစ်ဒဏ်ကျမှ ။ အစိုးရ မတရားဘူး ၊ စစ်တပ်ကတမင်လုပ်တာ ၊ တရားစီရင်ရေးစနစ်ကြီး ပျက်ဆီးနေတာ ၊ စာပေလွတ်လပ်ခွင့် နှိပ်ကွပ်တာဆိုပြီး လေးဘက်ကုန်းအော်တယ် ။
(၄) ပီး တော့ အရှက်မရှိ .... ကိုယ့်ဘာကို ဆန္ဒပြပြီး ...ဆန္ဒပြကြောင်းသတင်းပြန်ရေးတယ် ။ သမ္မတ နဲ့ ရုပ်ရှင် / ဂီတ / သဘင် တွေ့ ဆုံး ပွဲ မှာ သတင်း မယူ တဲ့ အကြောင်းသတင်း ပြန်လုပ်ရေးကြမယ်တဲ့ ။ အဲဒီ အကြောင်း ကို ပြည်သူများ စွာ က ပိုက်ဆံပေး ဖတ်ရဦးမယ် ။ ပီးတော့ ပြည်သူ့ မျက်စိ ပြည်သူ့နား ပြောကြဦးမယ် ။ ရှက်ရကောင်းမှန်းလည်းသိမထင်ဘူး ။ ငိုစား ရီစား ။ ၂ ဖက်ချွ န် ကြီး များ လိုပဲ ။
(၅) ဖြစ်လာတော့ ဘာဖြစ်တုန်း ။ အကွက်တော့ ဝင်ပဟ ဆိုပြီး .... Journalists arrested after publication of Chemical Weapons story , existence ofa'secret chemical weapon factory' in Magwe's Pauk Township ဆိုပီး ပိုပိုသာသာ လေး အင်္ဂလိပ်လိုရေးပီး ...မဇ္ဇျိမ ၊ ဒီဗွီဘီ ၊ အာအက်ဖ်အေ ၊ ဘီဘီစီ ဖြန့်တယ် ။ ဘာဖြစ်လာ တုန်း ... တခြား လူ့အခွင့်ရေးတွေ ဘာတွေ တွင်တွင် ပြောတဲ့ နိုင်ငံ တွေ က ..အရမ်းစိုးရိမ်ပါတယ်ဆိုတာမျိုးတွေဖြစ်လာတယ် ။ ပီးတော့ ကော အစိုးကို ဖိအားပေးတာတို့ ၊ မီဒီယာသမားတွေ အထောက်ပံ့ ပေးတာတို့ လုပ်ချင်လုပ်လိမ့်မယ် ။ သူတို့ သိတာ ဒါပဲ ။
(၆) သူတို့ မသိတာ ဘာလဲ ။ တခြားနိုင်ငံ တွေ က WMD တွေ ၊ Chemical Weapon တွေ အကြောင့် စောင့်ကြည့် လေ့လာနေတဲ့ အဖွဲ့တွေရှိတယ် ။ ဘာဖြစ်လဲ ။ သူ့ဘာသူ ဓာတုလက်နက်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ... မြန်မာပြည်ရဲ့ ကာကွယ်ရေးပစည်း လက်နက် စက်ရုံတွေ ဂြိုလ် တု က နေရှာဖွေ ကြတယ် ။ တွေ့ ကြတယ် ။ နိုင်ငံတကာ က ကာကွယ်ရေး ဖိုရမ်တွေ ၊ ဝဘ် ဆိုဒ်တွေ မှာ အဲဒီသတင်း source ကိုအခြေတည်ပြီး ဆွေးနွေးကြတယ် ။ နိုင်ငံ အသီး သီးက ထောက်လှမ်းရေး တွေ မပြော နဲ့ သာမာန် စစ်ရေး ၊ စစ်လက်နက် စိတ်ဝင်စား တဲ့ လူတွေ က အစ အနည်းဆုံးတော့ googling လုပ်ပီး ဒီ အကြောင်းရာတွေ ဆွေးနွေးလာကြတယ် ။
မလုပ်ဘူး ထင်ရင် အောက်က ဝဘ်ဆိုဒ် လင့်ခ် ကြည့် ... ခင်ဗျား တို့ ဖင်ယား မှု က ဘယ်လောက်ထိ ခရီးရောက်တယ်ဆိုတာ ဂျာနယ် က ဓာတ်ပုံ နဲ့ အစဆွဲထုတ်သွားတာ စက်ရုံတစ်ခုလုံးအကုန်ပေါ်တယ် http://www.nonproliferation.org/suspect-defense-facility-in-myanmar/
အဲဒါ ဝဘ် ဆိုဒ်တစ်ခုပဲရှိသေးတယ် ။
(၇) ပီးရင် ဖင်ပိတ်ငြင်း ၊ ကျီးကန်တွေလို ဝိုင်းအာကြသေးတယ် ။ ဓာတုလက်နက်ဟုတ်သည်ဖြစ်စေ ၊ မဟုတ်သည်ဖြစ်စေ အဲဒီ စက်ရုံတွေ က တစ်နိုင်ငံ လုံးချွေးနည်းစာနဲ့တည်ထားကြရတာ ။ ကိုယ့် နိုင်ငံ လုံခြုံရေး အတွက် ၊ အင်အားတောင့်တင်းရေးအတွက် ဒီစက်ရုံတွေ ပေါ် မှာ မှီခိုထားကြရတာ ။ နေရာကြီးသိ သွားကြပြီဗျာ ၊ စိတ်ဝင်တစားလည်းစောင့်ကြည့်ခံရပီ ။ လှည့်စားကြရတာ ။ စစ် ပွဲ တွေရဲ့ အရိုးရှင်းဆုံး သီအိုရီ ရှိတယ် ။ ကိုယ့် အကြောင်း ကို က ကြီးအစ အ အဆုံး အားလုံး သိမယ် ဆိုရင် စစ်ပွဲ နိုင်နိုင်ချေ ၅၀ ရှိတယ် ။ ကိုယ်နဲ့ တိုက်မဲ့ ရန်သူအကြောင်း ကိုယ် အားလုံး သိတယ်ဆိုရင် စစ်ပွဲ နိုင်နိုင်ချေ ၅၀ ရှိတယ် ။ အဲဒီ အတွက် သူများ ဟာ ကို များများ သိအောင် ကြိုးစား ရသလို ၊ ကိုယ့်ဟာ ကို သူများ မသိအောင် လုံခြုံရေးတင်ကြပ်ကြရတယ် ။ ခင်ဗျား တို့ ဘယ်လောက် ပွင့်လင်းပါတယ် ၊ တိုးတတ်ပါတယ် ၊ မြန်ဆန်ပါတယ် ဆိုတာတွေ တခြားနေရာတော့ ဟုတ်ချင် ဟုတ်မယ် ။ ယနေ့ ချိန်ထိ လုံခြုံ မှု စိတ်ချရအောင် ကွန်ပြူတာ မသုံး ၊ နက်ဝေါ့ခ် မသုံးပဲ ၊ လက်နှိပ်စက် သုံးနေတဲ့ စစ်ရေး စင်တာတွေ အများကြီးပဲ ။
(၈) ကျုပ်တို့ ကလူတွေ ကိုယ်ချင်းစာတတ်တယ် ။ သတင်းထောက်တွေ ထောင် ၁၀ နှစ်ကျတယ် ။ ပျော်နေတဲ့သူမရှိဘူး ။ ခရိုင်တရားရုံးအဆင့်ပဲရှိသေးတယ် ။ ဥပဒေ လမ်းကြောင်းအရ အယူခံဝင် ၊ သက်သာအောင်လုပ် ... ဘယ်သူမှ ဘာမှ ပြောမှာ မဟုတ်ဘူး ။ အခုဟာ က အပစ်မရှိပဲ နှိပ်ကွပ်ချင်လို့ ထောင်ချသယောင်ယောင် ၊ ဘာမှ မထိခိုက်သယောင်ယောင် လုပ်နေလို့ ပြောနေတာ ။
မြန်မာနိုင်ငံဟာ တရုတ်၊ အိန္ဒိယ၊ ဘင်္ဂလား၊ ထိုင်းနိုင်ငံတွေနဲ့ ထိစပ်နေတာ ဖြစ်ပါတယ်။ တကယ်လို့ စစ်ဖြစ်လာရင် ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာတွေ ကြောင့် ဒီနိုင်ငံ စစ်ရှုံးရမယ် ဆိုရင် တရားခံက ခင်ဗျားတို့ မီဒီယာတွေပဲ။ ကိုယ့်အပြစ်ဟာ နိုင်ငံအတွက် ဘယ်လောက်ကြီးလေးသလဲ ဆိုတာကို မစဉ်းစားမဆင်ခြင်ဘဲ ကျီးကန်းလို ၀ိုင်းပြီးအာ၊ ဆန္ဒတွေပြ၊ ထောင်ကျတန်းကျမှာကျတော့ သေမလောက်ကြောက်နေတဲ့ ခင်ဗျားတို့ တိုင်းပြည်ဆိုတာဘာလဲ၊ တိုင်းပြည်အတွက်ဆိုတာ ဘာလဲ သိစေချင်လို့ ရေးသားလိုက်ရတာပဲ ဖြစ်တယ်။
From: ရုပ်ဆိုး, ဦးညိုလွင်ဦး
ထိုင်းဘုရင့်ကောင်စီ ဥက္ကဋ္ဌက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို သားအဖြစ် မွေးစား
14:00 တပ်မတော် သတင်း 1 comment
ထိုင်းဘုရင့်ကောင်စီဥက္ကဋ္ဌ Prem Tinsulanonda နှင့် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်တို့ မကြာသေးမီက ထိုင်းနိုင်ငံတွင် တွေ့ဆုံစဉ် (ဓာတ်ပုံ – The Nation)
အငြိမ်းစားယူပြီးနောက် သမ္မတ ရာထူးရယူလာနိုင်တယ်လို့ ခန့်မှန်းနေကြတဲ့ လက်ရှိ ကာကွယ်ရေး ဦးစီးချုပ် ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို ထိုင်းစစ်ဦးချုပ်ဟောင်း Prem Tinsulanonda က သားအဖြစ် မွေးစားတယ်လို့ စင်ကာပူအခြေစိုက် The Straits Times သတင်းစာက ဖော်ပြပါတယ်။
ထိုင်းမီဒီယာများရဲ့ ဖော်ပြချက်အရ ၂၀၁၂ ခုနှစ်မှာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင် ထိုင်းနိုင်ငံကို လာရောက်လည်ပတ်စဉ် ကတည်းက သူ့ကို သားအဖြစ် မွေးစားဖို့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Prem Tinsulanonda ကို တောင်းဆိုခဲ့ကြောင်း၊ အသက် ၉၄ နှစ်အရွယ်ရှိပြီး သားသမီးအရင်းအချာလည်း မရှိတဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Prem Tinsulanonda ကလည်း သားအဖြစ် လက်ခံခဲ့ကြောင်း သိရပါတယ်။
၂၀၁၂ ခုနှစ်မှစ၍ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်နဲ့ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Prem Tinsulanonda တို့ ၃ ကြိမ် တွေ့ဆုံခဲ့ကြပါတယ်။ ဇူလိုင်လအတွင်း နောက်ဆုံးတွေ့ကြချိန်မှာ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Prem Tinsulanonda ဟာ ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်၊ သူနဲ့အတူလိုက်ပါလာသူ ၂၁ ဦးတို့နဲ့ နေ့လည်စာ စားခဲ့ကြကြောင်း၊ ဗိုလ်ချုပ်ကြီးဟောင်း Prem Tinsulanonda က မွေးစားသားကို ပေးခဲ့တဲ့လက်ဆောင်ကတော့ သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင် အမှတ်တံဆိပ်ကို ရိုက်နှိပ်ထားတဲ့ လည်စည်း တခုဖြစ်ကြောင်း သိရပါတယ်။
အခု ဆက်ဆံရေးအသစ်က ပိုမိုနက်ရှိုင်းမယ့် အသွင်ရှိကြောင်းနဲ့ ထိုင်း-မြန်မာ နှစ်နိုင်ငံ ထိပ်ပိုင်း စစ်ခေါင်းဆောင်များရဲ့ ဆက်နွှယ်မှုက ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအဆင့် ရောက်လာကြောင်း The Straits Times သတင်းစာက ရေးပါတယ်။
၂၀၁၃ ခုနှစ် မေလကုန်ပိုင်းတုန်းက ဗိုလ်ချုပ်မှူးကြီး မင်းအောင်လှိုင်ကို မြန်မာ-ထိုင်း တပ်မတော် နှစ်ရပ် အကြား ချစ်ကြည်ရေး တိုးတက်အောင် လုပ်ဆောင်နိုင်ခဲ့လို့ ဆိုတဲ့ အကြောင်းပြချက်နဲ့ ထိုင်းဘုရင်မင်းမြတ်က တော်ဝင် ဘွဲ့တံဆိပ် ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသေးတယ်။
မေလ ၂၂ ရက်နေ့က အာဏာသိမ်းခဲ့တဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်နဲ့ မြန်မာ အစိုးရတို့ ဆက်ဆံရေး နွေးထွေးလာခြင်းရဲ့ အစောပိုင်း သင်္ကေတအဖြစ် ထိုင်းနယ်စပ်မှာ ရှိတဲ့ ဒုက္ခသည် စခန်းများက မြန်မာဒုက္ခသည် ၁ သိန်း ၃ သောင်းကျော်ကို မြန်မာပြည် ပြန်ပို့ဖွယ် ရှိနေပါတယ်။
ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်တွင် ရှိနေကြသည့် ဒေသဆိုင်ရာ နှစ်ဖက် တပ်မှူးတွေဟာ နှစ်ပေါင်းများစွာ ဆက်ဆံရေး ရှိခဲ့ကြပြီး တခါတရံ သက်ဆိုင်ရာ စစ်ရုံးချုပ်များနဲ့ အစိုးရများရဲ့ မူဝါဒအတိုင်း မဟုတ်ဘဲ လွတ်လပ်စွာ ထိတွေ့ ဆက်ဆံခဲ့တာမျိုးတွေလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော်လည်း မူးယစ်ဆေး၊ သဘာဝ သယံဇာတနဲ့ တိုင်းရင်းသား ပဋိပက္ခများရဲ့ အကျိုးဆက်ကြောင့် သဘောထား ကွဲပြားရသော ကိစ္စများလည်း ရှိခဲ့ပါတယ်။
နာမည်ကျော် ထိုင်းသတင်းစာဆရာ Kavi Chongkittavorn ကတော့ “လုံခြုံရေး ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်မှုရဲ့ အလဲအလှယ်အနေနဲ့ ထိုင်းစစ်တပ်က အထူးအခွင့်အရေးတွေ ရနေခဲ့တာ လူတိုင်းသိတဲ့ လျှို့ဝှက်ချက်ဖြစ်ပါတယ်။ အထူးသဖြင့် အကျိုးအမြတ်များတဲ့ သစ်နဲ့ ကျောက်မျက်ရတနာ လုပ်ငန်းတွေ ဖြစ်ပါတယ်။ တချိန်တုန်းက ထိုင်း-မြန်မာ နယ်စပ်မှာ ရှိနေတဲ့ လုံခြုံရေးတပ်ဖွဲ့တွေက ဗဟိုအစိုးရက ညွှန်ကြားတဲ့ မူဝါဒကို မလိုက်နာတာက ဖြစ်ရိုးဖြစ်စဉ် တခုဖြစ်ပါတယ်” လို့ ရေးသားခဲ့ပါတယ်။
စက်တင်ဘာတွင် စရောင်းမည့် တယ်လီနောဆင်းကတ် မြို့ကြီးသုံးမြို့ကို ဦးစားပေးမည်
တယ်လီနော မိုဘိုင်းဖုန်း ဆင်းကတ်များ စတင်ရောင်းချမည့် စက်တင်ဘာလတွင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေးနှင့် နေပြည်တော် မြို့ကြီး သုံးမြို့ကို ဦးစားပေး ဖြန့်ချိ ရောင်းချသွားမည်ဖြစ်ကြောင်း တယ်လီနော မြန်မာ၏ အမှုဆောင်အရာရှိချုပ် Mr.Furberge က ဇွန်၁၄ ရက်က မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
လက်ရှိတွင် မိုဘိုင်းကွန်ယက် တည်ဆောက်ခြင်းအတွက် မိုဘိုင်းတာဝါတိုင် တည်ဆောက်ခြင်းများ၊ မိုဘိုင်းနက်ဝက်ပစ္စည်း တပ်ဆင်ခြင်းများ လုပ်ဆောင်နေပြီး စက်တင်ဘာလအမှီ စတင်ဝန်ဆောင်မှုပေး နိုင်မည်ဟု ၎င်းက ထပ်လောင်းပြောကြားထားသည်။
လစဉ် မိုဘိုင်းကွန်ရက်ချဲ့ထွင်ခြင်းပြုလုပ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လာမည့် ငါးနှစ်အတွင်း တစ်နိုင်ငံလုံး၏ မိုဘိုင်းကွန်ယက် ၉ဝ ရာခိုင်နှုန်းကျော်ကို ရောက်ရှိလာမည်ဟု ခန့်မှန်းထားကြောင်း ၎င်းက ဆိုသည်။
တယ်လီနောမိုဘိုင်းဆင်းကတ်၏ ဖုန်းခေါ်ဆိုများကိုလည်း အသက်သာဆုံးဈေးနှုန်းဖြင့် ခေါ်ဆိုနိုင်ရန် စီစဉ်သွားမည်ဖြစ်ပြီး လက်ရှိအချိန်တွင် ဈေးနှုန်းကို တရားဝင် ပြောဆိုနိုင်ခြင်း မရှိသေးဟု Mr.Furberge က ပြောသည်။
12:00 သောက်တလွဲ စတုတ္ထမဏ္ဍိုင် No comments
တာချီလိတ်၌ မိုးရွာ၍ မြေထိန်းနံရံပြိုကျရာမှ လွတ်မြောက်လာသူ (၄)ဦးအား စိတ်အားမငယ်ရန်အတွက် ဒေသအုပ်ချုပ်ရေးဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများမှ အားပေးရင်း ဆေးကုသငွေထောက်ပံ့
၂၀၁၄ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့ နံနက်(၃)နာရီအချိန်ခန့်က တာချီလိတ်မြို့၊ ၀မ်ကောင်းရပ်ကွက်ထဲရှိ မြန်မာရွာတွင် မိုးသည်းထန်စွာ ရွာသွန်းမှု ဖြစ်ပွားပြီးနောက်မှာ ကျောက်ကြီးစီထားသော မြေထိန်းနံရံသည် နေအိမ်အခန်းငှားပေါ်ကို ပြိုကျလာပြီးနောက် ကလေး (၃)ဦးနှင့် လူကြီး(၄)ဦး စုစုပေါင်း (၇)ဦး သေဆုံးခဲ့ပြီး (၄)ဦး ဒဏ်ရာ ရရှိသည့်ဖြစ်စဉ်တစ်ခု ဖြစ်ပွားခဲ့ပါသည်။
ထိုသို့ ဖြစ်ပွားမှုကြောင့် အမျိုးသား(၂)ဦး အမျိုးသမီး(၂)ဦး စုစုပေါင်း(၄)ဦးကို တာချီလိတ်ပြည်သူ့ဆေးရုံသို့ ဆေးဝါးကုသနိုင်ရန်အတွက် ပို့ဆောင်ထားပြီးနောက် ယနေ့ ၂၀၁၄ခုနှစ် ဇူလိုင်လ(၁၄)ရက် နံနက်ပိုင်းတွင် တာချီလိတ်(အခြေချ) စစ်ဗျူဟာမှူး ဗိုလ်မှူးကြီး ဇော်နိုင်ဦး၊ ပြည်နယ်လွှတ်တော်ကိုယ်စားလှယ် ဒေါ်တင်မေထွန်း၊ တာချီလိတ်ခရိုင်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးတင်ဝင်းရွှေ နှင့် မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူး ဦးထွန်းထွန်းဝင်းတို့ ပါဝင်သည့် ခရိုင်/မြို့နယ်အဆင့်ရှိ ဌာနဆိုင်ရာ အကြီးအကဲများက ဆေးရုံအတွင်း သွားရောက်ပြီး လူနာများအား လိုအပ်သည်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်အတွက် ကြည့်ရှု အားပေးခဲ့ကြသည်။
ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ လူနာ(၄)ဦးဖြစ်သည့် အသက် (၃၉)နှစ်ရှိ ဦးအောင်ကျော်လွင်၊ အသက်(၂၇)နှစ်ရှိ ကိုမျိုးလင်းအောင်၊ အသက်(၃၇)နှစ်ရှိ ဒေါ်လဲ့လဲ့မြင့် နှင့် အသက်(၂၇)နှစ်ရှိ မစန်းစန်းမြင့်တို့အား အဆိုပါ အဖွဲ့မှ တစ်ဦးလျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေ (၂၀၀၀)နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း (၈၀၀၀)ဘတ်ကို လက်ဝယ်အရောက် ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြသည်။
ထိုသို့ ထောက်ပံ့ရင်းနှင့် စစ်ဗျူဟာမှူးကြီး နှင့် ခရိုင်/မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့မှ အဆိုပါ လူနာများအား လိုအပ်သည်များကို ကူညီဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန်နှင့် သက်သာသည်အထိ ဆေးကုသမှုခံယူနိုင်ရန်အတွက် ဆောင်ရွက်ပေးနိုင်ရန် ဆေးရုံရှိ တာဝန်ရှိသူများအား ညွှန်ကြားပြီးနောက် ထိခိုက်ဒဏ်ရာရ လူနာများအား စိတ်အားမငယ်စေရန်နှင့် လိုအပ်သည့် အကူအညီများရှိလာပါက ၎င်းတို့ထံ တိုက်ရိုက်ပြောဆိုနိုင်ကြောင်း စသည်ဖြင့် စစ်ဗျူဟာမှူးကြီး နှင့် ခရိုင်/မြို့နယ်အုပ်ချုပ်ရေးမှူးနှင့်အဖွဲ့မှ အားပေးစကား ထပ်လောင်းပြောကြားသွားခဲ့ကြသည်။
ပြိုကျမှု အသက်ဘေးမှ လွတ်မြောက်လာသူ အသက်(၃၉)နှစ်အရွယ် ဦးအောင်ကျော်လွင်က "ဖြစ်တာက တစ်နာရီခွဲလောက်ပေါ့ မိုးတွေက တအားရွာနေတဲ့အချိန်မှာ ခြင်ထောင်ပေါ် မိုးကကျတော့ ကျွန်တော့်အမျိုးသမီးက မိုးကျနေတယ် ဟိုဘက်နည်းနည်းတိုးလို့ ပြောနေတဲ့အချိန်မှာ ကျွန်တော်က နည်းနည်းရွှေ့လိုက်ချိန်မှာပဲ ဗြုန်းဆို အပေါ်ကနေပြုတ်ကျတယ်၊ အဲ့လို ပြုတ်ကျလာချိန်မှာ မိုးကြိုးပစ်တယ်လို့ ထင်လိုက်တာ၊ နောက်ပြီးမှ နံရံတွေက တဖြေးဖြေး ပြိုကျလာပြီးတော့ လူပေါ်ကို ပိသွားတာ၊ အဲ့လို ပိနေတဲ့အချိန်မှာ မိန်းမရေ ပိသွားပြီလို့ ပြောနေရင်းမှာပဲ သတိလစ်သွားတယ်.."ဟု တာချီလိတ်အွန်လိုင်းသို့ ပြောပြလာသည်။
ယင်းကဲ့သို့ပင် မြေပြိုမှု ဖြစ်ပွားသည့် နေ့ဖြစ်သည့် ဇူလိုင်လ(၁၃)ရက်နေ့ ညနေ
(၅)နာရီအချိန်က တာချီလိတ်မြို့ နဂါးနှစ်ကောင်ကျောင်းတိုက်ဆရာတော် အဘိဓဇ အဂ္ဂမဟာသဒ္ဓမ္မဇောတိက အဂ္ဂမဟာပဏ္ဍိတ Honorary Ph.D. နဂါးနှစ်ကောင်ဆရာတော် ဘုရားကြီး "ဘဒ္ဒန္တဓမ္မသီရိ"၏ ညွှန်ကြားမှုအရ မြေပြိုရာတွင် အသက်မသေဘဲ လွတ်မြောက်လာခဲ့သော အဆိုပါ (၄)ဦးအား ထောက်ပံ့ငွေအဖြစ် တစ်ဦးလျှင် ထိုင်းဘတ်ငွေ (၅၀၀၀)နှုန်းဖြင့် စုစုပေါင်း ထိုင်းဘတ်ငွေ (၂၀၀၀၀)ဘတ်တိတိကိုလည်း ထောက်ပံ့ပေးအပ်ခဲ့ကြောင်းနှင့် ဇူလိုင်လ(၁၅)ရက်နေ့တွင်လည်း နဂါးနှစ်ကောင်ဆရာတော်ဘုရားကြီးမှ ထပ်မံ လှူဒါန်းသွားမည်ဖြစ်ကြောင်းလည်း သိရှိရသည်။
ဖားကန့်မြို့အနီးရှိ ရွှေ မှော်တစ်ခုတွင် ငွေကြေးများစွာ ဖဲရှုံးသွားသူ၏ ဇနီးသည်က ငရဲမီးသောက်၍ ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယ် သတ်သေမှုတစ်ခုဖြစ်ပွားခဲ့ကြောင်း သတင်းရရှိသည်။
ဇူလိုင် ၁၂ ရက် နံနက်က ရွှေမှော်တွင် အလုပ်လုပ်နေသည့် အမျိုးသမီးတစ်ဦး ငရဲမီးသောက် ၍ သတ်သေခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။ ရဲ တပ်ဖွဲ့၏ စုံစမ်းစစ်ဆေးမှုများအရ အဆိုပါအမျိုးသမီး၏ ယောက်ျား မှာ ဖဲဝိုင်းတွင် ငွေကြေးများစွာ ရှုံးသွားသောကြောင့် ရွှေကျင်ရာ ၌ အသုံးပြုသည့် ငရဲမီးကို သောက်ခဲ့ခြင်းဖြစ်ကြောင်း ဖားကန့်မြို့မရဲစခန်းမှ ရဲအရာရှိတစ်ဦးက ပြောသည်။
ငရဲမီးသောက်ပြီးပြီးချင်း ဖားကန့်မြို့နယ် တမခန်ဆေးရုံသို့ တင်ပို့ခဲ့သော်လည်း ထိုညတွင်ပင် သေဆုံးသွားပြီး အဆိုပါအမှုကို ရွှေပြည်မြင့်နယ်မြေရဲစခန်း၌ အမှုဖွင့်စစ်ဆေးလျက်ရှိသည်။
ကျောက်စိမ်းတူးဖော်ရေး လုပ်ငန်းအများအပြားရှိရာ ဖား ကန့်မြို့အပါအဝင် ကချင်ပြည် နယ်နှင့် စစ်ကိုင်းတိုင်းဒေသကြီး အတွင်းရှိ ရွှေတူးဖော်ရေးလုပ်ငန်း များတွင် နှစ်လုံးထီ၊ သုံးလုံးထီ၊ လေးကောင်ဂျင်၊ ခြောက်ကောင် ဂျင်ကစားနည်းများအပြင် ဒေသ အခေါ် တရုတ်ဖဲဟုခေါ်သည့် ဖဲကစားနည်းများ ကျယ်ကျယ်ပြန့် ပြန့်ကစားနေကြပြီး ဒေသတွင်းအုပ်ချုပ်သူများကလည်း အရေးယူမှုအားနည်းနေကြောင်း ဖားကန့်မြို့ဒေသခံရှေ့နေ ဦးစိုင်းထွန်းက ပြောသည်။
နာကျင် ဒဏ်ရာရရှိသူများကို ရဲဆေးစာမလိုဘဲ ဆေးကုသပေးမည်
မတော်တဆ ထိခိုက်မှုများ၊ ခိုက်ရန်ဖြစ်ပွားမှုများကြောင့် နာကျင်မှု ဒဏ်ရာရရှိခဲ့သူများအား ရဲဆေးစာမပါဘဲ ဆေးကုသမှုပေးမည်ဟု ဒုတိယရဲမှူးကြီးဝင်းစိန်က နေပြည်တော်ရှိ ရဲချုပ်ရုံးတွင် ဇူလိုင်လ ၁၅ရက်က သတင်းစာရှင်းလင်းပွဲတွင် ပြောသည်။
“ရဲဆေးစာမပါရင်လည်း လက်ခံကုသပေးနိုင်ပါတယ်၊ ဘယ်ဆေးရုံ၊ ဆေးခန်းတွေမှာမဆို ကုသပေးနိုင်ပါတယ်၊ အဲဒီအတွက် ဆေးရုံဆေးခန်းတွေကို အရေးယူတာမရှိပါဘူး၊ ရဲစခန်းတွေကို အချိန်နဲ့တပြေးညီ သတင်းပေးရင်လည်း ရဲဆေးစာ ချက်ချင်းလုပ်ပေးမှာဖြစ်ပါတယ်” ဟု ဒု-ရဲမှူးကြီး ဝင်းစိန်က ရှင်းပြသည်။
မိမိအလိုအလျှောက် နာကျင်မှုတွေမှာ ဒဏ်ရာရရှိသူကို ဆေးရုံတွေ၊ ဆေးခန်းတွေက ဆေးစာမပါရင် လက်မခံသည့်အပေါ် မီဒီယာများ၏မေးမြန်းချက်ကို ပြန်လည်ဖြေကြားခဲ့ခြင်းဖြစ်သည်။
နေပြည်တော်ရှိ ပုဂ္ဂလိကဆေးရုံတစ်ခုမှ တာဝန်ရှိသူ မပိုပိုကမူ “ပွန်းပဲ့တာမျိုး၊ အပေါ်ယံဒဏ်ရာ တွေကိုတော့ လူနာရဲ့ ကိုယ်ရေးအကျဉ်းနဲ့ ခံဝန်ကတိလက်မှတ်ထိုးခိုင်းပြီး ကုသပေးပါတယ်၊ ပြင်းထန်တဲ့ ဒဏ်ရာမျိုးတွေကိုတော့ ပြည်သူ့ဆေးရုံ ကုတင်တစ်ထောင်ကိုပဲ ချက်ချင်းလွှတ်ပါတယ်” ဟု မဇ္ဈိမကို ပြောသည်။
ထို့အပြင် ရန်ကုန်၊ မန္တလေး၊ နေပြည်တော်စသည့် မြို့ကြီးများရှိ ပြည်သူ့ဆေးရုံကြီးများတွင် ရဲတပ်ဖွဲ့မှ ၂၄ နာရီ သီးသန့်တာဝန်ချထားပြီး ရာဇဝတ်မကင်းသော ပြစ်မှုနှင့်ဆက်နွယ်ပြီး အရေးပေါ်ရောက်လာသော လူနာများကို ချက်ချင်းဆေးစာပေးနိုင်အောင် ဆောင်ရွက်လျက်ရှိသည်ဟုလည်း ဒုရဲမှူးကြီး ဝင်းစိန်က ထပ်လောင်းဖြေကြားခဲ့သည်။